Deconstructing Deconstruction - Xarunta EcoTechnology
Waa maxay Dib u dhiska?
EPA waxay ku qiyaastay intaas 600 milyan oo tan oo ah qalab dhisme iyo dumin Waxaa lagu tuuray Mareykanka sanadkaan 2018. Waxyaabahan la tuuray waxay ka yimaadeen dhismooyinka duminta iyo dayactirka culeyskooduna waa in ka badan laba jibaar tan dhammaan qashinka kale ee sanadlaha ah ee dowladda hoose ee Mareykanka. Dariiqa ugu wanaagsan ee looga leexin karo qashinka qashin-qubka loona siiyo walxo badbaadin kara nolol labaad ayaa ah iyada oo dib-u-dhis lagu sameeyo.
Dib u dhisku waa habka dhisme loo kala qaadayo, gabal gabal, iyo badbaadinta qalabka iyo qalabka halkii laga dumin lahaa. Ilaa 70% qalabka dib ayaa loo isticmaali karaafurayaa faylka PDF , iyo ilaa 25% qalabka dib ayaa loo isticmaali karaafurayaa faylka PDF ku jira guri dumis. Tan waxaa loo samayn karaa laba siyaabood: xariijin jilicsan ama nadiifin buuxda.
Qalab jilicsan ayaa asal ahaan qaata dhammaan walxaha aan qaab-dhismeedka ahayn gudaha iyo dibedda guriga ama dhismaha si loo fududeeyo duminta, dib-u-habaynta, ama dib-u-habaynta. Tan waxaa ku jiri kara waxyaabo ay ka mid yihiin qalabka guryaha, sagxadda dhulka, xirmooyinka golaha wasiirada, iwm.
Dhinaca kale, dibudhis buuxa ayaa badbaadin kara waxyaabo badan. Waxyaabaha ay ka midka yihiin asfalt, shubka, gidaarka nadiifka ah ee gypsum, birta, iwm. Dhammaantood waa la badbaadin karaa. Nidaamkani wuxuu qaataa waxoogaa ka dheer xarkaha jilicsan wuxuuna qaadan karaa meel kasta inta u dhexeysa toddobaad ilaa dhowr bilood - iyadoo kuxiran cabirka mashruuca.
Dib u dhisku ma aha oo kaliya inuu waxyaabaha ka ilaaliyo qashinka oo wuxuu siiyaa waxyaabo qurux badan nolol labaad, laakiin sidoo kale wuxuu abuuraa shaqooyin. Xaqiiqdii, dib-u-dhiska ayaa abuuraya 6 ilaa 8 shaqo 1dii shaqoba dumintaasi waxay abuurtaa. Waxay sidoo kale u horseedi kartaa raad yar oo kaarboon ah maaddaama ay ka hortageyso qiiqa ka soo baxa soosaarka alaabada cusub. Marka lagu daro saameynta deegaanka iyo bulshada ee dib-u-dhiska, sidoo kale waxaa jira faa'iidooyin dhaqaale.
Qiimaha mashruuca dib u dhiska ayaa ku kala duwan kiiska kiisba kiis. Si kastaba ha noqotee, markay ugu deeqayaan agabyada la burburiyey ururada samafalka, cashuur bixiyeyaashu waxay dalban karaan canshuur dhimis. Natiijo ahaan, dib-u-dhiska ayaa mararka qaarkood noqon kara ka jabanfurayaa faylka PDF ka badan burburinta cashuurta ka dib. Tan kaliya maahan inay caawiso cashuur bixiyeyaasha, laakiin qalabka la burburiyey ayaa markaa lagu iibiyaa qiimo jaban, taas oo ka caawin karta mulkiilayaasha guryaha dakhligoodu hooseeyo mashaariicda guryahooda.
Bilow Mashruuc Dhisme
Haddii aad xiiseyneyso inaad abaabusho mashruuc dib-u-dhis, habka ugu fudud ee aad ku billaabi karto waa adigoo la xiriiraya qandaraasle dhisme maxalli ah. Tusaale ahaan, qandaraaslayaal sida Joe DeRisi oo ka socda Macdan qodayaasha magaalooyinka iyo Bob Chamberlain oo ka socda Burburka Eyga Mad kaa caawin kara hawshan mulkiilayaasha guryaha, qandaraaslayaasha, iyo ganacsiyada guud ahaan MA, CT, RI, iyo NH. Waxbadan ka baro shaqada Bob qabto halkan, iyo waliba sheekooyinka kale ee macaamiisha halkan.
Xagee bay aadayaan qalabkan la burburiyey? Meelo sida Habitat loogu talagalay Aadanaha iyo Gorgortanka EcoBuilding qaado waxyaabo kala duwan oo dumay kana keydi alaabta waxtar leh qashinka. Gorgortanka EcoBuilding waa dukaanka qalabka dhismaha ee ugu weyn ee la soo celiyo ee ku yaal New England wuxuuna bixiyaa adeeg xamuul BILAASH ah oo lagu soo qaado wixii alaab ah ee la badbaadiyay.
Ma dooneysaa inaad ku deeqdo walxaha? Baro waxa ay aqbasho gorgortanka EcoBuilding halkan. Ama waxaad la xiriiri kartaa Takhasusleena Soo-kabashada & Deeqaha John Celesk iyo Freya Bromwich wixii macluumaad dheeraad ah. John wuxuu lashaqeeyaa macaamiisha bariga MA iyo RI, Freya wuxuu lashaqeeyaa macaamiisha dhamaan galbeedka MA, CT, iyo NY.
Dhammaan agabyada la aqbalay waa laga soo qaadi karaa, iyadoo aan lacag lagu qaadaynin goobaha shaqada, ganacsiyada, iyo guryaha. Fadlan buuxi kuweena foomka ku-deeqaha internetka ama wac 413-788-6900 si aad jadwal ugu samayso adeegga soo-qaadista ka hor inta aanad keenin tabarucyada iman kara.
Marabtaa inaad iibsato agab dib loo soo ceshay? Booqasho Gorgortanka EcoBuilding at 83 Warwick Street ee Springfield, MA ilaa dukaanka waxyaabaha sida qalabka, armaajooyinka jikada, iyo waxyaabo kaloo badan!